शीर्ष १० डेस्कटप वेब ब्राउजर | ग्याजेट समाचार
आज केही प्रयोगकर्ताहरूलाई थाहा छैन कि यो एक हो वेब ब्राउजर। कुनै कम्प्युटर, मोबाइल उपकरण वा अन्य मल्टिमेडिया उपकरणहरू प्रयोग गर्ने कुनै पनि प्रयोगकर्ताको बारे स्पष्ट छ कि कुन एप्लिकेसन इन्टरनेट खोल्नुहोस् खोल्ने बारे। केहि कम व्यक्तिहरूलाई पहिले नै थाहा छ विकल्पहरू उपलब्ध छन्। प्रत्येक अपरेटि system सिस्टममा कम्तिमा एउटा वेब ब्राउजर डिफल्टद्वारा स्थापित छ र धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यो ब्राउजर छोड्छन् र वेबको परामर्श लिन यसलाई प्रयोग गर्दछन् उनीहरूले के प्राप्त गर्न / हराउन सक्दछन् भन्ने बारे सचेत नहुँदा यदि तिनीहरूले फरक ब्राउजर प्रयोग गर्ने निर्णय गरे भने।
यहाँ के हामी एउटा उत्तम डेस्कटप वेब ब्राउजर मान्दछन् को एक सूची छ। सूचीमा लगभग सबै प्रकारका र अधिक प्रयोग हुने डेस्कटप अपरेटिंग सिस्टमहरू (विन्डोज, लिनक्स र म्याक) को ब्राउजरहरू हुनेछन्। तिनीहरू मध्ये केही अरू भन्दा पूर्ण छन्, तर त्यहाँ केहि सीमितहरू पनि छन् जुन चाखलाग्दो हुन सक्छ, विशेष गरी ज्यादै माग नगर्ने प्रयोगकर्ताहरूका लागि लाइटवेट ब्राउजर धेरै विकल्पहरूको साथ एकमा।
निम्नलिखित सूची हाम्रो राय अनुसार लेखिएको छ। तपाईं मध्ये कोही अर्डर वा देखा पर्ने ब्राउजरहरूमा सहमत हुन सक्नुहुन्न, तर बिभिन्न व्यक्तिहरूको बिभिन्न मत छन्। विस्तृत बिना, यहाँ सूची छ।
5 माइक्रोसफ्ट एज
6 टर्च ब्राउजर
8 Tor ब्राउजर
9 अवन्त ब्राउजर
सूचीमा पहिलो, जबकि मलाई थाहा छ धेरैको लागि यो दोस्रो हुनुपर्दछ, मोजिला फायरफक्स हो। यस ब्राउजरको पछाडि लामो पछाडि पछाडि पछाडि छ र यो ब्राउजर नै हो अनुकूलित गर्न सकिन्छ। तर यसको फाइदाहरू त्यहाँबाट रोकिदैनन्, यो टाढाबाट। मोजिला ध्यान दिन्छ गोपनीयता ग्राहकहरुको, केहि NSA जासूस घोटाला पछि अधिक महत्त्वपूर्ण भएको छ।
माथिको बाहेक, मोजिलाको बहुमुखी ब्राउजर छिटो, भरपर्दो र अरू कुनै राम्रो ब्राउजर जस्तै मिल्दो छ विस्तारहरू, ती मध्ये केही केवल फायरफक्सका लागि उपलब्ध छन्। यो पूर्वनिर्धारित रूपमा केहि लिनक्स वितरणमा स्थापना भएको छ, जस्तै उबन्टु मेट, र यसको पछिल्ला संस्करणहरूमा यसले हामीलाई डकडकगो खोजी इन्जिन, मेरो मनपर्ने प्रस्ताव गर्दछ। सारांशमा म भन्नेछु कि फायरफक्स एक अलराउन्डर हो।
संगतता: विन्डोज, म्याक र लिनक्स।
दोस्रो स्थितिमा, मलाई थाहा छ धेरैका लागि यो पहिलो हुनुपर्दछ, गुगल क्रोम हो। म यो पहिलो स्थानबाट किन कम गर्ने मुख्य कारण गोपनीयता हो, किनकि हामी सबैलाई थाहा छ कि गुगलले विज्ञापनमा आफ्नो व्यवसायको मोडेल राखेको छ र यसको लागि यसले हाम्रो बारेमा निश्चित जानकारी जान्नु आवश्यक छ।
त्यो भनियो, क्रोम पनि एक धेरै बहुमुखी ब्राउजर हो। यो लगभग फायरफक्सको रूपमा अनुकूलन योग्य छैन, तर हामी धेरै विस्तारहरू थप्न सक्छौं, जुन धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि ब्राउजरहरूको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यसका साथै यो पनि हो धेरै विकासकर्ताहरू द्वारा मनपराइएको ब्राउजर र डिजाइनरहरू, एक कारणको लागि। अर्कोतर्फ, यो त्यहाँ बाट सब भन्दा छिटो ब्राउजर हो।
अर्को ब्राउजर जुन मलाई वास्तवमै मनपर्दछ ओपेरा हो। यो एक्स्टेन्सनसँग पनि उपयुक्त छ, केही चीज जुन मेरो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ (म तिनीहरूलाई स्थापना गर्ने बित्तिकै सबै ब्राउजरहरूमा २ स्थापना गर्छु), तर यो उनीहरूसँग अनुकूल छैन वा क्रोम वा फायरफक्स जत्तिकै अनुकूलन योग्य छैन। ओपेराको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा र यो सूचीमा यो प्रमुख स्थितिमा हुनुको कारण यो निर्लज्ज रूपमा काम गर्दछ सानो शक्तिशाली उपकरण, जहाँ इन्टर्नेट जडानको पनि यसको केही कुरा हुन्छ। ओपेरासँग ढिलो जडानहरूको लागि एक मोड छ जुन एकदम ध्यान दिएर छ र हल्कापनको भावना दिन्छ। यदि तपाईंको अर्डर सीमित छ भने, तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नुहोस्।
दुबै ओएस एक्स र आईओएसका लागि एप्पलको ब्राउजर। यद्यपि यसले भारी महसुस गर्न सक्दछ यदि हामी प्रत्येक पटक ईतिहास खाली गर्दैनौं, यो एकदम छिटो र तरल पदार्थ हो यदि हामीले यसलाई हरेक हप्ता स्वचालित रूपमा गर्यौं भने कम्तिमा यसको भर्खरको संस्करणहरूमा। एप्पलको ब्राउजर भएकोले, यो यस्तो छैन कि यो धेरै अनुकूलित गर्न सकिन्छ, तर यसले समर्थन विस्तार गर्दछ र म यसलाई थोरै प्रयोग गर्दछु।
अर्कोतर्फ, यो एक हो जुन ओएस एक्सको साथ राम्रोसँग जान्छ। प्रणाली विस्तारहरू थप्न सकिन्छ कि उदाहरणका लागि, ब्राउजरबाट टेलिग्राममा साझेदारी गर्न वा फ्लोटिंग विन्डो (हेलियम) मा भिडियो खोल्नको लागि अनुमति दिन्छ। सेयर मेनू। यदि हामीसँग जादुई ट्र्याकप्याड वा एप्पलबाट ल्यापटप छ, हामी पनि गर्न सक्दछौं इशाराहरूद्वारा यसलाई नियन्त्रण गर्नुहोस् कसरी पृष्ठ अगाडि वा पछाडि दुई औंलाहरू संग जान, ट्याब मोड प्रविष्ट गर्न पिन्च वा पूर्वावलोकन लिंक पृष्ठ प्रविष्ट नगरीकन। सफारी ब्राउजर हो जुन म 90 ०% समय प्रयोग गर्दछु।
यद्यपि अझै धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले इन्टर्नेट एक्सप्लोरर प्रयोग गर्छन्, माइक्रोसफ्टको कुख्यात ब्राउजरले यसको दिनहरू गन्न सकेको छ। एक मरेको राजा, राजा राख्नुहोस्, र विन्डोज कम्प्युटरहरू नेभिगेट गर्नका लागि राजा एज हुनुहुन्थ्यो, उसको नयाँ प्रस्ताव। यस समयमा यसमा नश्वर पाप छ, किनकि यसले एक्सटेन्सनहरू स्थापना गर्न अनुमति दिदैन, तर यो २०१ something को शुरुमा निश्चित हुनेछ।
माइक्रोसफ्ट एजको नयाँ शक्तिहरू, पावर जस्ता एक टन छन् केहि पृष्ठहरूमा कोर्नुहोस् वेब, र यो धेरै अस्खलित छ। योसँग UI छ जसले हामीलाई सोच्दछ कि हामी ट्याब्लेटमा छौं, जसले यसलाई पर्याप्त हुन अनुमति दिन्छ हल्का र छिटो। यो आज होईन, तर मलाई लाग्छ बाकी ब्राउजरहरू एजको बारेमा चिन्तित हुनुपर्दछ। वैसे, तपाईंको लोगो मात्र चीज हो जुन ईन्टरनेट एक्सप्लोरर जस्तो देखिन्छ।
टर्च ब्राउजर क्रोमियम (जुन बदले क्रोममा आधारित छ) मा आधारित ब्राउजर हो जुन विशेष रूपमा उपभोक्ताका लागि डिजाइन गरिएको हो मल्टिमिडिया, विशेष गरी संगीत। योसँग एक इन्टिग्रेटेड टोरेन्ट म्यानेजर छ, यसको आफ्नै प्लेयर छ, टर्च म्युजिक र टर्च गेम्स, जसले सबै संगीत प्रेमीहरुलाई र केवल संगीत मात्र खुशी पार्नेछ।
क्रोमियममा आधारित भएर, यो अधिक विस्तारहरूसँग अनुकूल छ जुन क्रोममा स्थापना गर्न सकिन्छ, जसले यसलाई उत्कृष्ट अनुकूलता र बहुमुखी प्रतिभा प्रदान गर्दछ। नकारात्मक पक्ष, अवश्य पनि, यो हो कि प्रत्येक स्थापित एड-अन जुन हामीले प्रयोग गर्दैनौं त्यसले ब्राउजरलाई तरलता र स्थिरता गुमाउँछ। जे भए पनि, यो त्यस्तो चीज हो जुन हामीसँग हुनेवाला छ यदि हामी विस्तारका साथ कुनै अन्य ब्राउजर लोड गर्दछौं।
मैले पहिलो पटक म्याक्सथनको बारेमा सुनेको थिए (म्याक्सथन क्लाउड ब्राउजर पनि भनिन्छ) जब मैले विन्डोज installing स्थापना गर्नु समाप्त गर्यो। माइक्रोसफ्टले हामीलाई धेरै चाखलाग्दो विकल्पहरू प्रदान गर्दछ (के तपाईंलाई थाहा छ हामी इन्टरनेट एक्स्प्लोररमा रुचि राख्दैनौं?) र ती मध्ये एउटा म्याक्सथन थियो। यस ब्राउजरले माग गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि सिर्जना गरिएको छैन जुन ब्राउजरमा धेरै टन विकल्पहरू छन्। म्याक्सथन प्रयोगकर्ताहरूको लागि सिर्जना गरिएको छ जसले प्राथमिकता दिन्छ तरल पदार्थ र चिल्लो अनुभव सबै कुरा गर्न।
हामी स्थापना भए पछि हामी के देख्छौंमा ध्यान दिन्छौं भने म्याक्सथन केही खास देखिँदैन। यसले के गर्छ, उदाहरणका लागि, हामी केही क्लिकहरूमा हाम्रा सम्पर्कहरूमा फोटोहरू पठाउन सक्दछौं। यसले हामीले गर्ने सबै कुराको पनि पूर्णरूपले समक्रमण गर्दछ, केहि विशेष गरी उपयोगी छ यदि हामीले धेरै कम्प्युटरहरूमा वा मोबाइल उपकरणमा काम गर्नुपर्‍यो भने। हामीसँग क्रोम वा फायरफक्समा उपलब्ध थुप्रै एक्स्टेन्सनहरूसँग यो उपयुक्त छैन, तर यसले अन्य धेरै चीजहरू गर्दछ जस्तै इशारा नियन्त्रण, पासवर्डहरूको स्वत: भरण र अभिभावकीय नियन्त्रण। कुनै श doubt्का बिना, यो उपकरणहरूमा विचार गर्न एक विकल्प हो जुन धेरै शक्तिशाली छैन, Acer Aspire One D250 जस्ताबाट मैले यी लाइनहरू लेखिरहेको छु।
यदि तपाइँ चिन्तित हुनुहुन्छ सुरक्षा र गोपनीयता, तपाइँ टोर ब्राउजर को लागी प्रयास गर्नु पर्छ। यो ब्राउजर टोर नेटवर्कको लागि जिम्मेवार ओनियनले सिर्जना गरेको हो। यो फायरफक्समा आधारित छ, जसले यसलाई अत्यधिक कन्फिगर र तेर्सो-पक्षका विभिन्न प्रकारका ऐड-अनहरूसँग उपयुक्त बनाउँदछ, तर यसले पूर्वनिर्धारित रूपमा राम्रो सुरक्षाको लागि हामीलाई मुक्ति र गोपनीयता प्रदान गर्दछ। यति धेरै कि यदि हामीले केहि add-ons निष्क्रिय गरेनौं भने हामी धेरै वेबसाइटहरूको धेरै भागहरू देख्न सक्षम छैनौं, विशेष गरी ती जसले कुकिज र ट्र्याकरहरूलाई दुरुपयोग गर्छन्।
जब हामी यसको वेबसाइटमा पढ्छौं, अवन्त ब्राउजर एकदम छिटो ब्राउजर हो जसले यसको ईन्टरफेसलाई धन्यवाद दिन्छ जसले हाम्रो ब्राउजिing अनुभवमा स्पष्टता र दक्षताको नयाँ स्तर ल्याउँछ। यसका साथै उनीहरूले त्यो पनि रेखांकित गर्दछन् लगातार अपडेट गरिएको छ, जसले सुरक्षाको एक बिन्दु थप गर्दछ। यो कम स्रोतहरू भएको कम्प्युटरहरूको लागि पनि उत्तम विकल्प हो, यद्यपि यससँग ढिलो जडानहरूमा गति सुधार गर्ने उपाय छैन।
थप रूपमा, यसले ब्राउजरमा नै केही उपकरणहरू समावेश गर्दछ, जस्तैaभिडियो डाउनलोडर र एक्सीलेटर डाउनलोड गर्नुहोस्, जुन सबै गुणहरू ब्राउजरमा भएका सबै प्रकार्यहरूसँग मिल्दछ। कुनै श doubt्का बिना, विचार गर्न एक विकल्प।
एक अनौपचारिक उबुन्टु प्रयोगकर्ताको रूपमा, म एपिफेनीलाई यस सूचीबाट बाहिर राख्न सक्दिन, विशेष गरी ब्राउजर जिनोमका लागि डिजाइन गरिएको। म जस्तो प्रयोगकर्ताको लागि, जससँग मेरो ल्यापटपमा उबुन्टु मेट संस्करण स्थापना गरिएको छ (पुरानो जीनोम डेस्कटप पुन: प्राप्ति गर्ने संस्करण), हामी मतलब गर्दैनौं कि हाम्रो ब्राउजरले भिडियोहरू डाउनलोड गर्न वा यसको छवि परिवर्तन गर्न सक्दछ। हामी के चाहन्छौं तर द्रव र स्थिर भएको बेला काम गर्ने ब्राउजर हो। यो सब भन्दा प्रख्यात विस्तार संग उपयुक्त छैन, तर त्यसो भए के हो? यसले उबन्टुमा मैले चाहेका सबै चीजलाई समर्थन गर्दछ र सबै चीज पूर्ण रूपमा गर्दछ।
स्थापना आदेश: sudo एपीफेनी - ब्राउजर स्थापना गर्नुहोस्
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » शीर्ष १० डेस्कटप वेब ब्राउजरहरू
भिवालदी, क्रोम / क्रोमियमको मुटुको साथ डिफन्ट ओपेरा १२ मा आधारित ब्राउजर अझै अल्फा चरणमा छ, पहिले नै केही बेटाहरू उपलब्ध छन् र सही ट्र्याकमा छ, हुनसक्छ यो धेरै सूचिहरूको अन्त्यमा हो र केहीमा यो हुन सक्छ वर्षमा पनि उल्लेख गरिएको छैन तर यो ओपेरा र क्रोमले केहि स्थानहरू छोड्नेछ, धेरै खराब यसले क्रोम एक्स्टेन्सनहरू प्रयोग गर्दछ जसले विज्ञापनको धेरै दुरुपयोग गर्छ, हामी पर्खनुपर्नेछ यदि अर्को शीर्षमा यसले एकमा देखा पर्दछ वा यो अर्को ओपेरा छाला / विषयवस्तुको साथ फोर्क बढी क्रोम रहन्छ।
धमिलो जवाफ दिनुहोस्
जोहान एम। स्यानटान्डर भन्यो
यस सूचीमा धेरै जसो मैले समीक्षा गरेँ, वास्तविक नम्बर एक हराइरहेको छ। म बाईडू ब्राउजरलाई अधिक सिफारिश गर्दछु, यसको प्रयोग पछि तपाईंलाई थाहा हुन्छ के राम्रो छ।
जोहान एम। स्यानट्यान्डरलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो लागि सबै भन्दा राम्रो YANDEX
मोरी कान्ते भन्यो
ठीक छ, ओपेरा निश्चित रूपमा नाकमा समाप्त भए पछि स्थापना भयो कि प्रत्येक दुईमा तीन म अनावश्यक विज्ञापनको टूलबारहरू प्राप्त गर्दछु, र यदि यस हप्ता एक प्रसिद्ध थिम पार्कबाट सबै सुरक्षा सेटिंग्स भएको पट्टी देखा परेको छैन भने केही आउँदैन। बाहिर, उसलाई यो भन्न दिनुहोस्, किनकि सबैमा यो धेरै पहिले नै देखा परेको हो कि होटेल खोज ईन्जिनको जस्तो हामी मध्ये धेरै जना उन्माद देखा परेको छ। यो अज्ञात हो र अनावश्यक विज्ञापन विरुद्ध लड्न? नुउ, यो अर्को ब्राउजर हो जसले आफूलाई आर्थिक रुचिमा बेचेर वेश्यावृत्ति गरेको छ।
मोरी कान्तेलाई जवाफ दिनुहोस्
२०१ of को सर्वश्रेष्ठ भिडियो खेलहरू